Ujyaalo Sandesh | » ‘जात्रै जात्रा’को ५१ दिने सफलता पार्टीमा को–को पुगे ? ‘जात्रै जात्रा’को ५१ दिने सफलता पार्टीमा को–को पुगे ? – Ujyaalo Sandesh
‘जात्रै जात्रा’को ५१ दिने सफलता पार्टीमा को–को पुगे ?
जेठको ३ गतेबाट रिलिज भएको चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ले देशका विभिन्न ७ हलमा ५१ दिनको प्रदर्शन सफलतापूर्वक पार गरेको छ । चलचित्रले ५१ दिनको सफलता पुरा गरेको अवसरमा काठमाण्डौको सोल्टी होटलमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरियो ।
कार्यक्रममा चलचित्रका कलाकार, प्राविधिकका साथमा वितरक, प्रदर्शक र मिडियाकर्मीलाई प्रमाणपत्र र सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो । ‘जात्रै जात्रा’को ५१ दिने सफलतासँगै निर्देशक प्रदिप भट्टराइले चलचित्र निर्देशनमा ५१ दिनकै ह्याट्रिक गरेका छन् । उनले, यसअघि निर्देशन गरेका ‘जात्रा र शत्रु गते’ पनि ५१ दिनसम्म चलेका थिए ।